Fabrix Myanmar: Scarf Myanmar Thanakha
Call Us Now+95 9977666888
Khawei Flower ( Luffa acutangula Roxb )
Khwar Nyo Flower ( Clematis Smilacifolia )
Lotus Flower ( Nelumbo Nucifera )
Myanmar Toys - Collection 1
Padauk Flower ( Pterocarpus Macrocarpus )
Pauk Flower ( Butea Monosperama )
Sagawar Flower ( Michelia Champa )
Tharaphi Flower ( Caophyllum Spectabile )
Thazin Flower ( Bulbophyllum Sp )
Yinmar Flower ( Chukrasia - Tabularis - Floral )
Myanmar Toys - Collection 2
Myanmar Toys - Collection 3
Myanmar Traditional Toys
Myanmar Zodiac Small
Myanmar Orchestra Small
Dreamscape 1 by CNK
Dreamscape2by CNK
Dreamscape3by CNK
Dreamscape4by CNK
Dreamscape5by CNK
Dreamscape6by CNK
Dreamscape7by CNK
Dreamscape 8 by CNK
Kain Nayie - Kain Nayar
Bagan Couples Dance
NAGAR , Myanmar Dragon
Bagan Couple Dance
Myanmar Lady Dance
Myanmar Couple Dance
Artist Collections T-Shirt
* အီးမေးလ် လိပ်စာ
အသုံးပြုသူအသစ်လား ?Register လုပ်ပြီး မှတ်ပုံတင်ပါ။
Myanmar Thanakha (Scarf)
သနပ်ခါးဟာ မြန်မာလူမျိုးတွေ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော်ကတည်းက စွဲမက်စွာ လိမ်းချယ်ခဲ့ကြတဲ့ သဘာ၀ရဲ့ ထူးခြားတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အလှအပတစ်ခုတည်းအတွက်ကြောင့် မဟုတ်ဘဲ၊ သနပ်ခါးရဲ့ ဆေးဘက်ဝင်အာနိသင်များကြောင့်လည်း သနပ်ခါးကို မြန်မာလူမျိုးတို့ မြတ်နိုးမှုပိုခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုနွေးစိုစွတ်တဲ့ ရာသီဥတုရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သနပ်ခါးလေးလိမ်းထားရင် အသားအရေကို အေးမြစေပြီး နေလောင်ဒဏ်ကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်တဲ့အတွက် အမျိုးသမီးတွေတင်မက အမျိုးသားများပါ သုံးစွဲလေ့ရှိပါတယ်။
ဒီလို လက်တွေ့ကျတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေအပြင် သနပ်ခါးဟာ မြန်မာမိန်းကလေးတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တဲ့အလှကို လှစ်ပြနေပါတယ်။ ဒီလက်ရာလေးမှာတော့ သနပ်ခါးလိမ်းထားတဲ့ မိန်းမပျိုလေးတွေရဲ့ သိမ်မွေ့ကျော့ရှင်းတဲ့ လှပမှုကို ပေါ်လွင်အောင် ပန်းပွင့်တွေစီချယ်ထားတဲ့ နေရာက မြန်မာဆန်တဲ့အလှနဲ့ မိန်းမပျိုလေးတွေကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
LightBlue (FX - 108520)
အရေအတွက် 49 ခုကျန်သေးသည်။
စုစုပေါင်း : Ks 30,000.00
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရွေးရန်AyeyarwadyBagoKayahKayinMagwayMandalayMonNaypyitaw Union TerritorySagaingShan-EastShan-NorthShan-SouthTanintharyiYangon
စုစုပေါင်းခန့်မှန်းခြေ : Ks 30,000.00
စျေးဝယ်သူ ဧည့်သည် (Quick Checkout)
Fabrix is digital fabric printing company who care for high quality of works and services. Create your personalised design printing on fabric for T-Shirt, Scarf, Shawl, Cloths, Home Decor, Premium Gifts, etc. We can serve you both pieces and roll.
* အီးမေးလ် ID ရိုက်ထည့်ပါ
Copyright ©2022 Xenon Company Limited. All Rights Reserved.